#Dhibaatoyinka Ka Jira Qoysaska, iyo Sida Lagu Helikara Qoys Wanaagsan Islamarkaana leh Tiir Adag - Get Latest News From Horn of Africa
By axadle	 On Jun 24, 2018 Last updated Mar 31, 2019
Qoraalkani waxaan kaga hadleynaa dhibaatoyinka ka jira qoysaska, iyo sida lagu helikara qoys wanaagsan islamarkaana leh tiir adag.
Baryahaan dambe waxaa soo badanaayey furitaanka iyo bur-burka qoysaska iyo waliba dayacanka caruurta.
Waxaase xusid mudan sidoo kale inay jiraan qoysas wanaagsan kuna guuleystay guurkoodi.
Waxaa hubaal ah qoysaska guuleystay inay kasoo gudbeen dhibaatoyin farabadan, waayo guul walba lagaaro waxaa kahoreysa dhibaatoyin iyo caqabada u baahan in laga gudbo.
Waxaa hubaal ah dhibatooyinka iyo caqabadaha ay ka soo gudbeen inay u bur-bureen qoysas iyaga la`mid ah.
“Hadaba, sideen kuheli karnaa qoyska wanagsan­?”
Waxaa jira qodoba muhiim ah oo keenaaya guushaas, waxaana ka mid ah: In la iska ilaaliyo waxwalba keeni kara ismaandhaaf ama halis gelinkara nolosha qoyska. Hadayse dhacdana in xal loo heli kara aan aheen kala tag iyo furiin.
“ In laxakameeyo hadalka, waayo hadalada qaar ayaa dhib weyn gaarsiya nolasha qoyska”
Haddii qofwalba carabkiisa xakameeyo taasi waxay keeneysaa waxyaabo badan oo xumaan ah inay ka gudbaan labada isqaba. Aqristoow, waxaa muhiim ah qofka intuusan hadlin inuu ka fikira wuxuu dhihi rabo, waayo taasi waxey kuu sahleysaa wixii xumaan ah inaad dib ula laabato.
Hadalka aan laga fiirsan wuxuu noqdaa mid micna daro ah islamarkaana dhaawac u geysan karo lamaanahaagi.
Tankale xiliyada qilaafka ama xanaaqa haka faa’ideysanin lamaanahaagi inaad waxyaaba ceebtiisa, ama xumaantiisa aad sheeg sheegto. Taasi waxey dhaawac wayn gaarsiisaa nolosha wada jiritaankiina.
Ogoow, qofka hadduu waxyaabaha qaar ku liito inay jiraan waxyaaba kale oo farabadan uu ku fiicanyahay. Taasi ku amaan, uguna hambaliyey waxwalba wanaag ah oo qabta.
Waxaad ogataa marwalba arooska kadib inay imaankaraan dabeecada ka duwan tii xiliga shukaansiga, waayo nolasha dhabta waxey soo baxdaa maalmaha arooska kadib. Diyaar u ahow inaad dhankaagi adkeeyso.
Tusaale, haddii khilaaf imaado inaad diyaar u ahaatid inaad tanaasul sameyso meel dhaxana la`iskuugu imaado.
Taasi oo keeneysa inaad heshaan xal waara oo dhex-dhexaad ah.
Waligaa ha`unoqonin sawab khilaaf yimid isfahanwaa dhankaagi ah in loo kala tago, ee ahow qof samra oona dhanka wanaagsan wax kafiiriya, waxaase ogataa furiinka inuusan aheen xalka ugu horeeya khilaafka.
“Runta iyo daacadnimad waa saldhiga qoyska wanaagsan”
Waxaad ogataa qoys walba innuu leeyahay khilaaf la xariira isfahan la`aan iyo is eedeyn, waana wax iska dabiici ah laba qof meel kuwada nool, marna waa la`isfahmaa, marna waa la`isqabtaa. Ee waxaad ogataa runta daacadnimada iyo wax isdawamaris la`aanta in loogu gudbi kara khilaafka.
“Sariirta wanaagsan waxay buuxisaa baahida jaceylka labada isqaba”
Waxaad marwalba ku dadashaa inaad dhameystirtid jaceeylka iyo baahida lamaanahaagi dhanka sariirta siwanaagsan oo xalaal ah, taasi waxey keentaa kalsooni, jaceeyl dheeraad ah iyo is aaminaad buuxda.
‘Dhaqaalaha iyo maamulka guriga’. Dhaqaalaha iyo maamulka qoyska wanaagsan wuxuu ka qataa qeyb aad muhiim u ah.
Marwalba daacad buuxda u ahaaw nolosha gurigaaga iyo baahiyadiisa inaad daboosho, waxaase muhiim sii ah in la`iskalifin waxyaabaha aan la`awoodina in la`isku dhibin oo laga gudbo .
“Hadalada naxriista iyo jeceylka ku dheehan”
Ogoow, hadalka naxriista leh wuxuu soo jeetaa qalbiga lamaanahaagi. Waxaa hubaal ah xiliga wada sheekeysiga guurka ka hor inaad isticmaali jirtay hadalo macaan oo naxriis leh.
Waxaad ogataa xiliga saxda eh aad isticmaali lahayd inay tahay guurka kadib, balse waxaa nasiibdaro ah markii la isguursado hadaladaasi inay yaradaan amaba meesha kabaxaan.
“Ogow xaaskaaga ama ninkaaga aad ugu wacdo hadalada macaan, sidda Macaan, Qaali, Xabiibi Iwm waxay boosween kaaga dhista qalbiga lamanahaaga.”
Ugu danbeyntii, hal qoraal laguma soo koobi karo qoyska wanaagsan iyo noloshiisa. Qoyska wanaagsan waxaa fura u ah dulqaad, samir, jeceyl, xishmad, aaminaad, wada tashi iyo waxwada qabsi.
Marka waxaa muhiim ah guurka ka hore in xariir wanaagsan la sameysto, waayo xariirka wanaagsan ayaa dhisaa guri wanaagsan.